H.264 Converter: Sida loo Beddelaan H.264 Files
Dad badan ayaa doonaya in loogu badalo video inay qaab H.264, waayo, waa qaabka ugu wanaagsan ee inta badan kombuyuutarrada gacanta caanka ah sida Apple iPhone, iPad, iPod taabashada iyo wixii la mid ah. Si loogu badalo in ay H.264 video ka qaabab kale sida AVI, wmv, MP4, MOV, FLV, MKV, M4V, Mpg, MPEG, VOB iyo wixii la mid ah, in aad isticmaasho Converter ah H.264 awood badan sida aad ku xigeen. Iska akhriso hoos ku qoran si aad u hesho sida ugu fiican H.264 video Converter.
Qeybta 1: Best Desktop H.264 Video Converter
Qeybta 2: 100% Free H.264 Video Converter
Qeybta 3: Free & Online H.264 Video Converter
Qeybta 1: Hel Best Desktop H.264 Video Converter
Professional Video Converter: Beddelaan dhammaan qaabab video ama ka videos H.264 dhaqsay u soomi aalladda iyo tayo wanaagsan leh.
Qaabab Wide taageerayaan: Taageerada loogu badalo videos in AVI, MKV, MOV, MP4, wmv, 3GP iyo in ka badan.
Sida dhaqsaha badan Video Converter: Beddelaan videos at xawaaraha diinta ugu dhaqsiyaha badan, 30X jeer ka dhakhsi badan converters kale.
Conversion sameecadda ah: Waxaa badasha videos aan laga badinin video tayada asalka ah.
Features kale: videos Edit, gubi video inay DVD, download videos ka goobaha la wadaago video iyo dar metadata in Lugood filimada, iwm
Sida loo Beddelaan H.264 Faylal ay si AVI, MKV, MOV, iwm
1. Import files si Converter H.264 this
Tag "Beddelaan" tab> "Add Files" menu xitaa dooro files ka kombiyuutarka. Markaas dajiyaan file kasta oo aad rabto in aad si loogu badalo in ay tani Converter file H.264.
2. Dooro qaab aad rabto in aad wax soo saarka ah
Wixii diinta H.264 ka qaabab kale, waxaad dooran kartaa MP4 qaab saarka H.264, waayo, waxaa ka mid ah qaabab ugu wanaagsan ee dhammaan waxyaabaha Apple iyo qalab kale. Si aad u samayn, riix qaab icon ee "Output Qaabka" Murayaad in la furo liiska hoos-hoos qaabka, dooro "MP4" in "Qaabka" ayuu> "Video" category, ka dibna waxay doortaa "H.264" sida video Encoder garaacida ah "Settings" doorasho.
Haddii aad u baahan tahay si loogu badalo files H.264 in qaab kale, kaliya dooro waxa aad rabtid in liiska qaabka wax soo saarka.
3. Start video diinta
Saxaafadda "Beddelaan" button ee dhinaca midigta hoose ee tan ku Video Converter 's interface inuu ku soo bilowdo diinta video. Sidee dheer habka inta badan qaadan doonta ku xiran tahay tirada dadka files daray iyo waxqabadka your computer.
Markii diinta la sameeyo, waxaad ka heli kartaa files saarka galalka wax soo saarka ah. Tani Converter H.264 weyn sidoo kale waxay bixisaa qaar ka mid ah muuqaalada tafatirka, sida miraha beeraha, kala, midowdo videos iyo darto saamaynta video iwm
Qeybta 2: H.264 Converter Free
# 1. H.264 Converter Free: Wondershare Video Converter Free
Pro: Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo H.264 in AVI, MKV, MOV oo dheeraad ah qaabab video ama Macdan music ka files filimka. Feature Anothe weyn waa in aad u isticmaali kartaa si aad xaalkaa videos hor coversion iyo soo bixi YouTube videos for offline aragtida.
1. H.264 free qalab diinta video ma u sheegi kartaa in aad loogu badalo videos la presets ee qalabka la qaadi karo.
2. Waxa aanu taageeraan gubashada video inay DVD la arrimo menu.
3. Waxaad u bedeli karaan oo keliya videos at 30X xawaaraha Soomi 10 beddelaad.
Qeybta 3: Online H.264 Video Converter
Sida loo Edit H.264 Files
Sida loo Play H.264 Files
H.264 in DVD: Sida loo Guba H.264 Faylal ay si DVD Saxannada
Top 10 Cinwaan converters
Sida loo Beddelaan MP4 si Jabbuuti
Sida loo Download iyo Beddelaan vimeo in Lugood
MP4 iDVD: Sida loo Beddelaan MP4 in iDVD ama DVD ee Mac (Yosemite ka mid ah)
Sida loo Play files VIDEO_TS
Sida loo Beddelaan wmv si Jabbuuti
Sida loo Play MKV on TV LG
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan H.264 Files